အနာဂတ်ခလေးများအရေး ရင်လေးဖွယ် နှင့် ကျှူရှင်ဆရာများ၏ အနုကြမ်းစီး ခံစားနေရမှု။ အပိုင်း(၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အနာဂတ်ခလေးများအရေး ရင်လေးဖွယ် နှင့် ကျှူရှင်ဆရာများ၏ အနုကြမ်းစီး ခံစားနေရမှု။ အပိုင်း(၁)
အနာဂတ်ခလေးများအရေး ရင်လေးဖွယ် နှင့် ကျှူရှင်ဆရာများ၏ အနုကြမ်းစီး ခံစားနေရမှု။ အပိုင်း(၁)
Posted by cobra on Aug 2, 2010 in News |5comments
လေးကျွန်တော်တင်ပြတာလေးကို စဉ်းစားပြီးတော့ နောင်လာမဲ့ အကျိုးဆက်လေးကို
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက ငယ်ငယ်ကတည်းက စာသင်တာကိုအရမ်းဝါသနာပါတယ်..။
သူ့ရဲ့ဘ၀အခြေအနေအရ နောက်ဆုံးမှာ သူက
စာသင်တယ်..။အဲ့ဒီလိုနဲ့ ရရာ စားစား ကျူရှင်ဆရာ ဘ၀ကို အစဉ်ပြေသလို
ပေးနိုင်သူပေး မပေးနိုင်သူ အလကားသင်နဲ့ဆိုတော့ သူ့မှာ
ကျောင်းလခဆိုပြီးပေးနိုင်တဲ့သူရှိသလို ၊ သူကိုယ်တိုင်က စာအုပ်ဝယ်ပေး
စားလောက်ရုံ၊မိသားစုတစ်ခုရပ်တည်နိုင်လောက်ရုံလေးနဲ့ ကျူရှင်ဆရာ ဘ၀ကို
မက်မောခုံမင်စွာ ရပ်တည်နေရတဲ့ ကျူရှင်ဆရာတစ်ယောက်ပေါ့..။
ဖြစ်ချင်တော့ ကျောင်းဆရာမတွေသာ ကျူရှင်မြေအောက်လောကကို
နောက်ဆရာမဆီကို တစ်ယောက်ကို ကော်မရှင်ဘယ်လောက်ပေးဆိုပြီး လက်လွှဲအပ်နဲ့
တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် သူတို့ လက်ထဲကနေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို အဆင့်ဆင့်
စာတော်ရင် ဒါမှမဟုတ် ငွေရှိလို့ကတော့ အဲ့ဒီခလေး
အဲ့ဒီကျောင်းဆရာမများဟာ အဲ့ဒီခလေးအိမ်ကိုရှာ မိဘတွေကိုတွေ့ သူတို့သင်တဲ့
စာသင်ဝိုင်းမှာ လာတက်ရန် အိမ်အရောက်မဲဆွယ်ပွဲတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်
စတင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်..။ကျောင်းတစ်ချိန်ပျက်ရင် ၅၀၀ ကျပ်မှ ၁၀၀၀
အတန်းတင်စာမေးပွဲအထိ ဥာဏ်ရည်အလိုက် အကျမရှိစေရေး အမျိုးမျိုး
စီစဉ်ပေးထားပါတယ်..။လုံးဝစာမကျက်တဲ့ခလေး၊ စာမလိုက်နိုင်တဲ့ခလေး တွေကို
စာကျက်ရန်မလို ကွက်လပ်ဖြည့်ကအစ မေးခွန်းကြည့်နေစရာ မလိုအောင် အဖြေကို
စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ကျောင်းပျက်တဲ့အခါလည်း ခွင့်တိုင်ဆရာမလိုအောင် ၊
ကျောင်းဆရာမ၀ိုင်းတက်ပေမဲ့လည်း ဒီဝိုင်းက ဆရာမက ဒီအတန်းမှာ
အတန်းပိုင်မဟုတ်တော့ အတန်းပိုင်ဝိုင်းမှာမတက်လို့ဆိုပြီး အတန်းပိုင်ဆရာမ
ရစ်တာတွေလည်း ရှိတက်ကြပါသေးတယ်။တစ်ချို့မိဘတွေဆို ဒီဝိုင်းမှာလည်းတက်
ဟိုဝိုင်းမှာလည်းအပ်နဲ့ ငွေရှိပြီး ဥာဏ်မရှိတဲ့ မိသားစုတွေကို
ကျွန်တော်တို့မြို့မှာတွေ့နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ လည်း ဒီစနစ်ဆိုးကြီးကို
ပျောက်သွားအောင်တော့ တိုက်ဖျက်မဲ့ မိဘတွေမပေါ်သေးပါဘူး..။ မိဘအများစုတော့
က အဲ့ဒီအမှောင်လောက ဆရာမများကို
စာညံ့တဲ့ကျောင်းသား/သူ ဒါမှမဟုတ် ငွေမရှိတဲ့ကျောင်းသား/သူဆိုရင်တော့
စာလည်းတော်တဲ့ခလေးဆိုရင်တော့ အရင်ဆရာမတွေလိုပဲ အိမ်အရောက်မဲဆွယ်ပွဲတွေ
ငှားပေးနိုင်ရပါမယ်၊စာသင်ကြေးကလည်း ၅၀၀၀၀မှ ၁၀၀၀၀၀ အထိရှိနေပါတယ်..။
သင်တဲ့ဆရာမ၀ိုင်းအချို့ကတော့ နှစ်စဉ်၂ဘာသာ ၃ ဘာသာ
ဂုဏ်ထူးသမားတွေပါကြပါတယ်။ သူတို့ဝိုင်းက ဘယ်လောက်အောင်တယ်ဆိုပြီး တော့
နောက်နှစ်အတွက် ဆက်လက်မဲဆွယ်ပွဲတွေကျင်းပ ..ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့ဟာ
ကျောင်းဆရာမ တွေရဲ့ဝါးမြိုမှုအောက်ကို အလိုလို
အခြားကျုရှင်ဆရာတွေထက်သာတာက သူတို့အတန်းတွင်းမဲဆွယ်မှုမှာ ကြော်ညာမလို
ကျောင်းသား/သူနဲ့ အနီးကပ်နေနေရတာတစ်ကြောင်းရယ်..တကယ်လို့ ကျူရှင်ဆရာ
တစ်ယောက်နာမည် ရလာပြီဆိုရင်လည်း သူတို့ထက် သာမသွားအောင် စာသင်ခန်းထဲမှာ
စာသင်ရင်းမှ နေပြီး အဲ့ဒီဆရာမကောင်းကြောင်းတွေကို ကြော်ညာတော့တာပါပဲ..။ကဲ
ပညာရှင်အရည်အတွက်ဟာ အဲ့ဒီအမှောင်လောက စတင်ခေတ်ကောင်းတဲ့အချိန်မှစပြီး
အပိုင်း(၁)အတွက် ဒီမှာ ခဏနားပါရစေ..။စာဖတ်သူအပေါင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
ဒီလိုအဖြစ်အပျက်ဆိုးတွေ က ယဉ်သလိုလိုနဲ့ အများအမြင်မှာ မတင့်မတယ် ဖြစ်မနေသလိုလိုနဲ့ မြန်မာ့ ပညာရေးလောက မှာ ဖြစ်လာနေတာပါ။
လုပ်နေတဲ့ ဆရာ/ဆရာမ တွေ ကိုယ်တိုင် က ငွေ ကိုပဲမြင်ပြီးတော့ သူတို့လုပ်ရပ် ဘယ်လောက်အောက်တန်းကျမှန်း မသိတော့ပါဘူး။
အားလုံးက လည်း ဘာမှ မဆန်းမစစ် ပဲ ကလေးမိဘများက ပိုဆိုးပြီး ကလေးတွေ အဆင့်၁ ရဖို့လောက်သာ သိတာ။
ပညာတကယ်တတ် မတတ်တော့ မသိဘူး။ နောက် မဟုတ်တာ လုပ်တဲ့ ဆရာမတွေကိုလည်း တိုင်ဖို့တောဖို့ သတ္တိ မရှိကြတာပါတယ်။
စည်းကမ်းထိမ်းသိမ်း ကြပ်မတ်ရမယ့် ပညာရေးမှူး အဆင့်လောက် ကမှ မလုပ်မရှုပ် လုပ်နေရင် ဘာမှကို ကောင်းဖို့ မရှိတော့ပါဘူး။
ဒါဟာ တကယ့်ကို လူပျင်း လူဖျင်း လေးတွေ မွေးထုတ်ပေးဖို့ မရည်ရွယ်ပဲ ဖြစ်နေတာပါ။ ကြာရင် မြန်မာတွေ အမျိုးတုံးတော့မယ်။
အ၇င်ဝန်ကြီးဟောင်းတဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမျိုးညွန့်ပြောသွားတဲ့စကားကြားယောင်မိပါ။ ဘာတဲ့ – “တပည့်မ၇ှား၊တပြားမ၇ှိ၊ ပီတိကိုစား၊အား၇ှိပါ၏”။ အမှန်ကတော့ပညာေ၇းလောကပျက်စီးတာအခုအသက်(၆၀)၀န်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်များစာသင်ကျောင်းသားဘ၀ကတည်းကပါ။ ၀ါးလုံး၇ှည်နဲ့၇မ်းပြောတယ်ဘဲ ပြောပြောဆ၇ာတွေငွေနောက်ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်နေကြတာကြာလှပါပြီ။ “ပြည်တွင်းကအားပြည်တွင်းမှာ၇ှိသည်”ဆိုတဲ့ ဗိုလ်နေ၀င်း၇ဲ့ ၇ှိ၇ှိသမျှမြန်မာမှုပြုေ၇းလုပ်လိုက်တာခုချိန်မှာတော့၇စ၇ာမ၇ှိအောင်ပါဘဲ။ တနိုင်ငံလုံးကိုမျက်စေ့ပိတ်နားပိတ်မှ လက်တဆုပ်စာတွေအာဏာသက်ဇိုး၇ှည်မှာမို့ – “ပြန်မာစာသည်တို့စာ၊မြန်မာစကားသည်တို့စကား၊တို့ပြည်ကိုချစ်ပါ၊တို့စကားကိုလေးစားပါ” ဆိုတဲ့ကြွေးကျော်ချက်နောက်ကိုမျက်စေ့စုံမှိတ်ပြီးအတင်း တွန်းတဲ့ထိပ်ပိုင်းကလူတစုကတွန်းလိုက်လို့ခုချိန်တနိုင်ငံလုံးချောက်ထဲကျနေပါပြီ။ နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးတွေတက်ကြတာခြင်းအတူတူ၊ ကွှန်တော်တို့ဗမာတွေအစည်းအဝေးမှာဘာတွေပြောနိုင်သလဲ -ကြည့်ပါ၊ ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းနဲ့ငုတ်တုတ်ပါဘဲ။ ဒါအမှန်ဖြစ်နေတာဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူး။ အထက်ကလူကပညတ်ထားလို့ပြောေ၇းဆိုခွင့်မ၇ှိ၇တဲ့အထဲ၊ ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့ language efficiency မ၇ှိတော့ပိုဆိုးတာပေါ့။ ချောက်ထဲကျနေတဲ့ပညာေ၇းလောကထဲမှာ ကျူ၇ှင်ဟာအပိုနောက်ဆက်တွဲဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ ထက်/လယ်/မူ စာသင်ကျောင်းတွေသာမက၊ ခုချိန်တက္ကသိုလ်တွေအပြင်၊ဆေးတက္ကသိုလ်တွေမှာတောင်ကျူ၇ှင်တွေ၇ဲ့နေ၇ာယူမှုကအတော်ကြီးထွားနေပါပြီ။ ကု၇ာနတ္ထိမ၇ှိတဲ့ကင်ဆာဖြစ်နေပါပြီ။ အစိုး၇ကျောင်းဆ၇ာများကျု၇ှင်မပြ၇ဆိုတဲ့ ဥပဒေလဲထုတ်လိုက်ေ၇ာ၊ ကျူ၇ှင်ခတွေဈေးမြောက်သွားပါတယ်။ ကျူ၇ှင်တွေလျော့မသွားတဲ့အပြင်တိုးလာတဲ့အပြင်၊ကျူ၇ှင်ခဟာမိသားစုတစု၇ဲ့ပုံမှန်ဝင်ငွေနဲ့ဘယ်လိုမှမလောက်နိုင်တဲ့ဝန်ထုပ်တခုဖြစ်သွားပါတယ်။ အခုအမေ၇ိကကိုေ၇ာက်လာတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေထဲက ကလေးတွေ၇ှိ၇င် “ဒီမှာကျူ၇ှင်၇ှိသလား”ဆိုတဲ့မေးခွန်းအကျင့်ကဒီအထိပါလာတာကိုကြည့်ပါ။ “ဆ၇ာ”ဆိုတဲ့ဂုဏ်ကိုမြန်မာပြည်ကဆ၇ာဆ၇ာမတွေကြားထဲမှာမီးထွန်း၇ှာ၇မလိုဖြစ်နေပြီ။ ကျောင်းအုပ်၊ပညာေ၇းမှူးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကနံမယ်တခုပေးထားပါတယ် – “ဗိုလ်ချုပ်မျှော်များ” လို့ (မိုးလင်းတာနဲ့သူတို့စဉ်းစား၇တာကအထက်ကဘယ်ဗိုလ်ချုပ်ကို ‘ဖား’၇မလဲ၊ ဘယ်ဗိုလ်ချုပ်ဒီနေ့ကျောင်းကိုလာမလဲ။ဘာလဘ်ထိုး၇မလဲဆိုတာဘဲခေါင်းထဲမှာ၇ှိတော့လို့ပါ။)
”မေးခွန်းကြည့်နေစရာ မလိုအောင် အဖြေကို
မိဘတွေ ဘယ်အချိန်အထိ အနီးကော အဝေးကော မှုန်နေဦးမှာလဲ။
ပညာရေးဆိုတာ အလွန်ကျယ်ပြန်.ပါတယ်။ အပိုင်းတစ်ပိုင်းထဲကိုပဲ ကြည်.ပီးပြောလို.မရပါဘူး။ ဆိုးကျိုးတွေရှိလာပီဆိုရင် ဖန်တီးတဲ.အကြောင်းအရင်းတွေလည်း ရှိမှာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို.ပညာရေးစံနစ်ဟာ ပျက်စီးနေတာ ကြာပါပီ။ အတွင်းလှိုက်ပီးတော. နေရာအမျိုးမျိုးမှာ ခြစားနေသလိုမျိုးပါပဲ။
လူတိုင်းက ပညာရေးစံနစ်မကောင်းဘူးဆိုတာ သိကြပါတယ်။ အပြစ်တင်တဲ.သူတွေလည်းများပါတယ်။ ဒါပေမယ်.လို. ကျွန်တော်လက်လှမ်းမီသမျှလူတွေကို မေးကြည်.တဲ.အခါ ပညာရေးနဲ.ပတ်သက်ပီး သေသေချာချာ စေ.စေ.စပ်စပ် တွေးခေါ်လေ.လာထားတာမျိုး မရှိပါဘူး။
မိတ်ဆွေတို.အနေနဲ.ရော ပညာရေနဲ.ပါတ်သက်ပီး ဘယ်လောက်များတွေးထားဘူးသလဲလို. မေးချင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ကိုယ်.အနေနဲ. ပညာရေးနဲ.ပါတ်သက်ပီး ကောင်းမွန်အောင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လောက်များ အကူအညီပေးဘူးသလဲလို.မေးချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော. ငယ်ငယ်ကသင်ခဲ.ရတဲ.အတိုင်းပဲ မိမိကိုယ်ကို အရင်ဆုံးကောင်းအောင်ကြိုးစားပါတယ်။ ကိုယ်.တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်ကြတဲ.သူတိုင်းအတွက် ပညာရေးဟာ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားစရာလို. ယုံကြည်ပါတယ်။
ဆရာမတွေက အခက်အခဲနဲ့ခိုးသင်ပေးရလို့ တဲ့ လခက ၃ဆလောက်တက်သွားရောဗျာ……………